Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay in marka sanad dugsiyeedku billowdo bisha soo | KWIT
Reynolds wuxuu sheegay in go'doominta dheeraadka ahi ay dhaawici karto horumarka bulsho iyo bulsho ee ardayda.
Baaqa ayaa qoysaska u oggolaanaya inay doortaan barashada fog. Waxa kale oo ay ballaarinaysaa cidda u qalmi kara beddelka macallin beddelay iyo muddada ay buuxin karaan.
Degmo Dugsiyeedka Bulshada Magaalada Sioux waxay wali ka shaqeyneysaa qorshe dhameystiran oo loogu talagalay sanad dugsiyeedka soo socda in lagu sameyn karo shaqsi ahaan, gebi ahaanba, ama isku darka labadaba. Iskuulka xagaaga ee fasalada qaarkood, oo ay kujiraan kan koowaad, labaad iyo sideedaad wuxuu bilaabmayaa 3-da Ogosto.
Iskuulada dadweynaha ee Nebraska waxay adeegsan doonaan cabir midab leh oo ay ku go'aaminayaan xayiraadaha ay dhigayaan marka iskuulada dib loo furo deyrta wajiga cudurka coronavirus.
Saraakiisha gobolka ayaa leh iskuulada loo arko inay ugu yar yihiin halista faafinta fayraska waxaa lagu calaamadeyn doonaa cagaar cabbir ahaan, ardaydana waxay u xaadi doonaan fasalada sida caadiga ah iyadoo la raacayo qaar ka mid ah nidaamka baaritaanka.
Iskuulada wajahaya halista ugu weyn ayaa lagu xidhayaa casaan, taasoo horseedi doonta ku laabashada waxbarashada fog oo aan kaqeyb galeyn ciyaaraha fudud.
Iskuulada khatarta dhexdhexaadka ahna waxay ku dhamaan doonaan jaalaha ama oranjiga, taasoo horseedi doonta xayiraad ay kujirto yareynta tirada
ardayda dhigata iskuulka hal mar oo u baahan maaskaro markay suurta gal tahay.
Gobolka Woodbury wuxuu soo sheegay 17 xaaladood oo cusub oo COVID-19 subaxnimo Jimcaha ah.
Waaxda Caafimaadka ee Siouxland ayaa sheegtay in kiisaska laga helay 145 baaritaan oo cusub. Taas waxaa ka mid ah baaritaanka la sameeyo kahor nidaamka caafimaadka.
Gobolka Woodbury wuxuu hada heystaa 3,418 xaaladood oo la xaqiijiyey oo ah cudurka neef mareenka, sida laga soo xigtay xogta caafimaadka bulshada Iowa. Kuwaas, 3,137 ayaa la soo sheegey in dib loo soo nooleeyey, waaxda caafimaadka ayaa werisay.
Gobolka Woodbury wuxuu lahaa 46 dhimasho oo loo aaneynayo COVID-19. Degmada Woodbury waxay diiwaan gelisay hal dhimasho midkastoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
Shalay, sedex degmo oo kale oo ka tirsan Siouxland ayaa ka warbixiyay dhimashada la xiriirta COVID-19. Buena Vista oo ku taal Iowa iyo Union ee South Dakota mid kastaa wuxuu soo sheegay hal dhimasho. Degmada Dakota ee gobolka Nebraska waxaa laga soo sheegay labo dhimasho ah marka la isku daro 41 iyo afar kiis oo cusub oo ah 1,830.
Caafimaadka Siouxland Health waxay ku dhiirigelinayaan deggeneyaasha inay sii wadaan qaadista tallaabooyin taxaddar ah si ay uga caawiyaan yareynta faafitaanka cudurka coronavirus, oo ay ka mid yihiin xirashada maaskaro meelaha dadku ku wada nool yihiin, guriga aad joogtid haddii adiga ama xubin reerka ka mid ahi aadan caafimaad qabin, weecinta bulshada iyo gacmo-dhaqashada joogtada ah.